Dhacdo.com - News: Maxaad Ka Taqaanaa Jaamacadda Unisel ee dalka Malaysia, warbixin kooban oo laga diyaariyay + Sawiro
14,428,380 unique visits
Maxaad Ka Taqaanaa Jaamacadda Unisel ee dalka Malaysia, warbixin kooban oo laga diyaariyay + Sawiro
Jaamacada UNISEL waxay ku taallaa magalada Shah Alam oo ah magaalada ugu warshadaha badan ee dalka Malaysia. Magaaladan ayaa waxay wax yar u jirtaa xarunta dalka Malaysia ee Kuala Lumpur iyadoo lagu tagi karo bas ama tareen.
Jaamacadaan ayaa waxaa la-aas aasay sanadkii 1999-kii, wixii xilligaas ka danbeeyay waxay noqotay jaamacad aad u baaxad weyn, iyadoo waxbarasho looga soo raadsado wadamo badan oo caalamka ku yaalla.
Jaamacadaan ayaa waxaa dhigta kumaakun oo Arday ah, kuwaasoo iskugu jira kuwo u dhashay dalka Malaysia iyo kuwo kala yimid wadamo badan oo caalamka ka tirsan.
Unisel oo aad loo-jecel yahay ayaa waxay bixisaa kuliyada muhiim ah, waxaana laga xusi karaa kuliyada ay bixiso.
1.	Kuliyada Handasada (Injineernimada)
2.	Kuliyada Sayniska
3.	Kuliyada Xisaabaadka
4.	Kuliyada Computerka
5.	Kuliyada Tiknoolajiyada
6.	Kuliyada Sayniska dawada
7.	Kuliyada Ganacsiga
8.	Kuliyada Waxbarashada
9.	Kuliyada isgaarsiinta iyo medhiyaha
10.	Kuliyada Maamulka
11.	Kuliyada Bay'ada
Dhanka kale Jaamacadaan ayaa waxay lee-dahay laba xaruumood, walow xaruunta weyn ee ku taallo magaaladda Shah Alam ee gobolka Selangor, halka xaruunta kalana ay ku taalo meel aanan sidaasi uga sii fogeyn xaruunta weyn oo lagu magacaabo Bestari Jaya.
Iskusoo wada-duuboo Jaamacadda ayaa waxay bixisaa waxbarashada Deploma, Degree, Master-ka iyo Bhd.
Wixii faah faahin intaas dheer kala xiriir aqoon114@hotmail.com
Galkacal on April 09 2010 13:23:09 ·
0 Comments · 11844 Reads